Ndị ahịa kacha mma, jiri ọsọ na - budata ngwa ngwa na mma Akụkọ akụrụngwa
Onye ahia kacha mma
Ụlọ Ignatius | | General
Teknụzụ P2P, nke ọ tụkwasịrị obi nke ukwuu .omi dị ka Bittorrent ghọrọ usoro iji nye nnukwu ịba uru. Bittorrent bụ usoro mgbanwe faịlụ, mana n'adịghị ka emule, kọmpụta ọ bụla na-aghọ isi iyi nke akụkụ niile nke faịlụ ahụ ebudatara ugbu a, n'ụzọ dị otú a, nbudata faịlụ dị nnọọ ngwa ngwa.
Mana, n’adịghị ka emule, Teknụzụ Bittorrent chọrọ trackers, nke mere na onye ahịa Torrent maara ebe ọ ga-aga ibudata ọdịnaya ahụ, ịdị oke mkpa iji malite nbudata nke ụdị ọdịnaya ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ị maghị ụdị ndị ahịa Torrent ga - ahọrọ, mgbe ahụ anyị ga - egosi gị ihe ọ bụ ndị kasị mma iyi ahịa nke ndị dị ugbu a n'ahịa.
1.1 Nzipu Akụ
8 Torrent ahịa n'ihi na gam akporo
9 Iyi ahịa maka iPhone
Ihe fọrọ nke nta kemgbe ọ rutere n'ahịa 13 afọ gara aga, Nnyefe aghọwo ndị kasị mma ngwá ọrụ na ahịa mgbe ọ na-abịa na nbudata na faịlụ site na Bitorrent. Ntughari bụ ngwa na-akwụghị ụgwọ ma na-emeghe. N'oge mmalite ya, ọ bụ naanị maka Apple desktọọpụ ilekota, ma taa ọ na-enye anyị a version maka Windows na Linux ilekota.
Ọzọkwa na-enye anyị nsụgharị maka NAS dị iche iche site na ndị nrụpụta ndị isi, dị ka Synology, Western Digital, D-Link ... nke na-enye anyị ohere ịhazi ngwaọrụ iji weghara nbudata ọdịnaya ahụ na-ejighị kọmputa anyị. Tranmission na-enye anyị nhọrọ nke ịchọpụta akpaghị aka na nbudata nke faịlụ .torrent na kọmputa anyị, nke mere na ka ebudatara, ngwa ahụ amata ha wee bido nbudata ahụ, na-ehichapụ ya .torrent
Tinyere akụkọ ihe mere eme ya ata ahụhụ dị iche iche na sava ya, na-amanye ụlọ ọrụ ka ha nọrọ na nsụgharị ndị dị na ebe nchekwa GitHub. Ọ bụrụ n'ị na - achọ onye ahịa Torrent na - akwụghị ụgwọ ọ bụla na - akwụghị ụgwọ, Tranmission bụ nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa.
Nhọrọ na nbudata ihe ntanetị dị ka mkpa anyị si dị.
Akpaka ụgbọ mmiri nkewa
Akpaghị aka maka ndị ahịa na-edo onwe ha n'okpuru data ụgha.
Nkwado maka nnyefe ezoro ezo
Nkwado maka ọtụtụ trackers
Kwekọrọ n'Ozizi na njikọ Igwe Ọdụdọ.
Kedu ihe bụ uTorrent na otu esi eji ya
Site na onye ochie dị ka nnyefe, anyị na-abụ onye ọhụụ, mana ọ bụ ya mere na anyị enweghị ike ịchịkwa ya ozugbo. WebTorrent bụ n'efu, emeghe ma ọ naghị enye anyị ụdị mgbasa ozi, ihe ị ga-enwe ekele maka ma sie ike ịnweta ụdị onye ahịa a.
Otu uru kachasị na ọ na-enye anyị maka ndị ahịa Torrent ndị ọzọ, anyị na-ahụ ya na nke ahụ ọ nwere ike ịnweta vidiyo site na airplay, Chromecast na DLNA, otu njirimara nke ndi ahia pere aka. Ọ dakọtara na Igwe Ọdụdọ na .torrent njikọ yana arụmọrụ ya dị mfe dịka ịdọrọ faịlụ .torrent n'ime ngwa ahụ iji malite nbudata.
Dị ka aha ya na-egosi, WebTorrent na-enyekwa anyị ohere jikwaa nbudata site na ihe nchọgharị weebụ, otu nhọrọ nke anaghị atụ aro ebe ọ bụ na anyị mechie ihe nchọgharị ahụ ihe nbudata na-akwụsị, mana ọ nwere ike ịdị mma maka ndị ọrụ nọrọ ụbọchị yana ihe nchọgharị mepere emepe.
WebTorrent dị maka Windows, Mac, na Linux. Budata WebTorrent
Ọ bụrụ n'ịchọrọ nzuzo mgbe ị na-ebudata ụdị faịlụ ndị a site na andntanetị ma nwekwaa ọkpụkpọ egwu, onye ahịa kachasị mma anyị nwere ike ịchọta bụ onye jọgburu onwe ya, onye ahịa nke na-eji ya onwe ya na netwọk na-eji nke atọ zighachi akwụkwọ nnọchiteanya sava n'etiti ziri ozi na-erite nke faịlụ. Mana ọ bụrụ na nhọrọ nzuzo ọ na-enye anyị ezughi, n'etiti usoro nhazi ya anyị nwere ike ịchọta nhọrọ iji mụta onye nzuzo nzuzo.
Jọgburu onwe ya, dị ka Nzipu na WebTorrent bụ n'efu, bụ oghere mepere emepe ma tinye njin nchọgharị na-egosi anyị faịlụ ndị a na-ebudata site na ngwa ndị ọrụ. Tmarers dị maka Windows, Mac na Linux. Download Egwu.
Vuze kụrụ ahịa na 2003, na afọ ole na ole, ọ melite ọ bụghị naanị njirimara onye ọrụ, kamakwa ọnụọgụ ọrụ na nhọrọ ọ na-enye anyị. Vuze jikọtara a njin ọchụchọ, dị ka ndị jọgburu onwe ha site na faịlụ niile a na-ekekọrịta site na ngwa gị.
Achọghị Vuze naanị maka ibudata faịlụ nwebisiinka, kamakwa na-enye anyị ohere ịkekọrịta faịlụ iwu na ndị ọzọ site na nkata nke ahụ na-enye anyị ngwa ahụ, usoro dị mma iji kesaa faịlụ buru ibu na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ na-enye anyị ohere izipu faịlụ buru ibu.
Vuze di na uzo abuo, otu nwere mgbasa ozi na-anaghị ekwe ka anyị kpọọ ọdịnaya mgbe ọ na-ebudata ma ọ bụ na-enye anyị nchebe megide antivirus na onye ọzọ nwere mgbasa ozi, nke dị ọnụahịa na $ 9,99, nke na-enye anyị nhọrọ abụọ a na mgbakwunye na ikwe ka anyị dekọọ faịlụ ndị ahụ anyị na-ebudata na DVD.
Vuze dị maka Windows, Linux, na Mac. Budata Vuze.
Otu n’ime ndị ahịa ama ama n’ụwa Bitorrent bụ uTorrent, otu n'ime ndị ahịa na-enye anyị uru kachasị mma gbasara njikwa akụ. Ngwa a nwere naanị 2 MB, yabụ anyị nwere ike ịchọta echiche ole na ole ọ nwere ike ịnwe na sistemụ anyị, yabụ ọ nwere ike ịrụ ọrụ na ndabere na-enweghị anyị ịchọtaghị n'oge ọ bụla.
Ma mee ka ọ dị mfe apụtaghị na ọ naghị enye anyị nhọrọ nhazi, Ebe ọ bụ na uTorrent na-enye anyị ohere ijikwa downloads n'otu n'otu ma ọ bụ jikotara aka yana ikwe ka anyị jikwaa ha remotely site na anyị ama.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta ihe kachasị na Torrent, dị ka ịkpọ vidio ndị ebudatara ma ọ bụ na-egwu ọdịnaya mgbe a na-ebudata ha, na-echekwa ha na antivirus, na-ebugharị faịlụ ndị ebudatara na ngwaọrụ ndị eche ma ọ bụ enweghị mkpa ibudata codecs, anyị nwere nhọrọ ịzụta Pro mbipute, nke ọnụahịa dị na euro 22.
Iyi dị maka Windows, Linux, Mac, na gam akporo. Budata Torrent.
Ma ọ bụrụ na ihe n'ezie nhọrọ nhazi iji nwee ike ịchịkwa oge niile etu esi ebudata faịlụ, bandwidth nke ngwa ahụ na-eji, ebe a na-echekwa faịlụ oge na faịlụ ebudatara, ọnụọgụ nke sistemu usoro enyere ngwa ... Bittorrent bụ onye ahịa ịchọrọ.
Bitorrent bụ otu n'ime ndị ahịa zuru oke na ahịa, ma ọ dị na nsụgharị atọ, otu zuru oke ma na-arụ ọrụ mana yana mgbasa ozi, onye ọzọ na-enweghị mgbasa ozi maka $ 4.95 kwa afọ na mbipute Pro. ngwa na-enye anyị ihe ọkpụkpọ vidiyo etinyere n’ime ya, nchedo antivirus, ọrụ ndị ahịa, yana ikwe ka anyị gbanwee nbudata iji nwee ike igwu na ngwaọrụ ọ bụla.
Bitorrent dị maka Windows, Mac, na gam akporo. Budata Akwukwo Nso
Ọtụtụ ndị ahịa iyi na-enye anyị ohere ịhazi otu nhọrọ, ma ọ dịkarịa ala ihe kachasị mkpa. Ọ gwụla ma anyị chọrọ iji otu onye na-azụ ahịa iyi, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ iji nke nweere onwe wee jiri ọkpụkpọ VLC, nke bụ otu ihe ahụ dị ka ndị ahịa iyi na-enye anyị ihe ọkpụkpọ agbakwunyere.
Banyere nchedo nje, ọ bụrụ na ị na-ejikarị otu weebụsaịtị ebudata iyi, na ị nweghị nsogbu ọ bụla ruo ugbu a n'ihe gbasara ọrịa, n'eziokwu ị chọghị mmemme nke ụdị a. Tụkwasị na nke a, ndị obodo na-ahụ maka iwepu ma ọ bụ ịkọ akụkọ faịlụ nwere faịlụ ma ọ bụ ndị na-abụghị ihe aha ahụ na-egosi n'ezie.
Torrent ahịa n'ihi na gam akporo
Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị na fim, egwu na ngwa na-akọrọ site na netwọk Bittorrent, ọ bụ ezie na ha na-anọchite anya 99% nke ihe ha na-eji, enwere ike iji Bittorrent ịkọrọ nta faịlụ na anyị enweghị ike ịkekọrịta site na email. Maka ebumnuche ndị a, iyi ngwa nwere uche.
Ugbu a n'ahịa, anyị nwere ike ịchọta abụọ gam akporo ngwa na-ekwe ka anyị ibudata iyi faịlụ site na anyị mobile ngwaọrụ jisiri site gam akporo. Anyị na-ekwu maka uTorrent na Bittorrent, mmadụ abụọ kachasị ewu ewu na desktọọpụ ahịa na ụwa na ọtụtụ eji ibudata iyi faịlụ. Ha abụọ dị maka nbudata kpamkpam n'efu site na njikọ ndị a.
orTorrent® - iyi nbudata
Ihe nbudata BitTorrent®-Torrent
Iyi ahịa maka iPhone
A Bittorrent ahịa na a mobile ngwaọrụ naanị ezi uche ọ bụrụ na anyị ejiri ya kesaa faịlụ ndị na - enweghị ebe anyị nọ arụ ọrụ ozi anyị na - arụ, ọrụ ndị anaghị ekwe ka anyị gafere 25 MB na mgbakwunye. Apple nwere ngwọta zuru oke maka ụdị azịza a, ebe ọ bụ ọrụ maka ibugo faịlụ na iCloud ma mesịa zigara onye nnata ozi ozi nwere njikọ iji budata ya.
Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ iji onye ahịa nke netwọk Bittorrent, na Storelọ Ahịa App anyị enweghị ike ịhụ ngwa gọọmentị ọ bụla nke ahụ na-enye anyị ohere ijikwa ha, ebe ha na-emebi ụkpụrụ nke Storelọ Ahịa App site n'inye gị ohere ibudata ọdịnaya echekwara site na nwebisiinka. Ma ọ bụrụ na anyị ngwaọrụ bụ jailbroken, anyị nwere ike ime ka ojiji nke iTransmission ngwa, ngwa dị site na Cydia ngwa ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Onye ahia kacha mma
Ndi Olympus PEN E-PL9 rutere na United States
Apple gosipụtara na Mac Pro ga-ada ahịa na 2019